[Wondershare] Data Recovery - Safe sy azo antoka Recovery Data Solutions
Nofafana Files Recovery
Ny Safe & Azo Itokisana Data Recovery Software
Vakio ihany, Loza-malalaka sy mahomby Cost-Data Recovery rindrambaiko ho an'ny Computers, mafy aelin'ny, Flash Namoaka Ireo, Memory Cards, ny finday, Cameras sy Camcorders
Andramo Tsy Free Andramo Tsy Free
Get ny Data Back Now!
"Wondershare Data Recovery ... dia manome taonina ny safidy ho sitrana ny fomba antontan-taratasy ary inona no karazana hitady, mba hahafahanao streamline ny dingana, ary mahazo ny vokatra izay tadiavinao haingana"
Avy CNET, mpitarika teknolojia haino aman-jery
Manana 5,000,000+ Data Recovery
Karazana rehetra fitehirizana ny antontan-taratasy saim-petsy rafitra NTFS, FAT16, FAT32 na exFAT no manohana.
Computer & Laptop (Recyle Bin Anisan'ny)
Floppy kapila , kapila Zip, iPod (Nano, Classic & shuffle) , Finday : Black Berry , Nokia , Android finday ... ihany koa manohana
DOC / DOCX, XLS / XLSX, PPT / PPTX, PDF, CWK, HTML / HTM, INDD, EPS, sns
JPG, ny tiff / Tif, PNG, BMP, GIF, PSD, CRW, CR2, NEF, ORF, RAF, SR2, MRW, DCR, WMF, DNG, ERF, manta, etc.
AVI, MOV, MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, FLV, SWF, MPG, RM / RMVB, sns
AIF / AIFF, M4A, MP3, WAV, WMA, tapaky ny volana / MIDI, Fichier son Ogg, AAC, sns
ZIP, rar, mipetraka, ary mahasoa hafa rakitra.
Zava-misy rehetra Data Loss Supported
Sarotra aleha na manta
Hery tsy nampoizina eny
Dratsy na ny fisarahana fisarahana fahadisoana
Factory Reset tsy misy nomaniny ho solon'izay
Reinstalled varavaran'ny rafitra na ny kapila mafy fianjeran'ny
Mac OS X 10.13 (Avo Sierra), 10.12 (Sierra), 10.11 (El Capitan), 10.10 (Yosemite), 10.9 (Mavericks), 10.8, 10.7, na 10.6
Hard kapila Space:
100 MB sy ambony toerana maimaim-poana
100% Safe sy mora indrindra Data Recovery Software
Wondershare Data Recovery, azo antoka sy mandaitra angona sitrana rindrambaiko, retrieves very ny lahatsary, sary, mozika, antontan-taratasy, mailaka, sns avy amin'ny PC ny fiara mafy ary koa avy amin'ny USB aelin'ny, mafy aelin'ny ivelany, sy ny fitehirizana fitaovana
Topi-maso ny antontan-taratasy rehetra mahita ny rindrambaiko sy mifidy izay olona tianao ho sitrana.
Ny lalina ao an-Data
Mampihetsika ny Lalina Scan mba hanomboka fikarohana lalina ny kapila.
Mora sitrana Files
Retrieve ny very na voafafa antontan-taratasy avy amin'ny PC na fitehirizana fitaovana amin'ny dingana tsotra.
Sitrana Data rehetra karazana ordinatera, fiara mafy, fiara Flash ... sy ny maro hafa
Jereo ny teknolojia famaritana
Mahery asa fizahana manampy anao hahita byte rehetra eo amin'ny fitehirizana fitaovana miadana sy ny mandroso rakitra-famerenana algorithm mamela anao mba hamerina voafafa, format na simba antontan-taratasy ao anatin'ny minitra.
" " Wondershare Data Recovery dia tsara tarehy mahomby sombin-rindrambaiko, raha ny amin'ny sitrana voafafa na zavatra very. Ny valin-ny fotoana tsara, ny interface tsara dia intuitive sy ny fitsapana tsy hita misy fahadisoana na nianjera.
Professional sy azo antoka
3 Modules dia natao manokana ho an'ny angon-drakitra very tranga hafa. Scan vokatra mety ho voavonjy sy dehibe ny programm mba hanomboka rakitra sitrana fotoana rehetra.
" " Wondershare Data Recovery dia safidy tsara ianao, rehefa very antontan-taratasy manan-danja ary te-hiverina araka izay azo atao. Manolotra tsara napetraka ny fitaovana ho an'ny mahita antontan-taratasy, ary ny notarafina mihazakazaka hampandeha tsara sy mahomby.
Fotsiny fa toe-javatra rehetra, No Tech Required
Computer nianjera? Zava-dehibe Files nofafana? Diso format? Tsy misy tokony hatahorana Now!
Data very noho ny famafana na fandrafetana fisarahana diso? Sitrana tahirin-kevitra voatahiry ao amin'ny partitions izay efa voafafa na format, ary na dia avy amin'ny very na miafina partitions.
Sitrana antontan-kevitra ho an'ny tsy nahy famafana partitions, fandrafetana kapila / partitions, na avy simba, na miafina partitions.
Fisarahana very noho ny repartition, baotin'i mpitantana, Clone-dratsy, rafitra indray, kapila loza etc.
Data very noho ny kapila fisarahana fianjerana sy ny virosy fanafihana fiara mafy, rafitra fametrahana fianjerana na Windows.
Fafao File Recovery
Voafafa tsy nahy antontan-taratasy manan-danja nomaniny ho solon'izay tsy misy sady foana ny "Recycle Bin"? Voafafa sitrana antontan-taratasy avy amin'ny PC / Laptop / Server sy ny haino aman-jery hafa fitehirizana mora sy haingana.
Tampoka hamafa rakitra amin'ny rariny kiti-sakafo na manindry 'Delete ".
File very noho to'Shift + Del 'tsy misy nomaniny ho solon'izay.
File very noho ny mivarina Recycle Bin.
Avereno tsy afaka nidirana, miafina na be mpanao kolikoly tahirin-kevitra izay matetika vokatry ny rafitra rakitra simba, manta mafy fiara, manta na fisarahana fisarahana very miaraka amin'ny angon-drakitra mahery vaika ity rindrambaiko sitrana.
Manta fisarahana na kapila izay maneho araka ny manta na 'Media / Drive tsy format, no tianao endrika ankehitriny?'
Mafy ny kolikoly ho an'ny hery tsy nampoizina-eny, rindrambaiko lozam, nitodika eny fitehirizana haino aman-jery nandritra ny dingana fanoratana, nety manongotra avy karatra SD.
Tranga hafa anisan'izany ny fitaovana initialization, otrik'aretina nanafika, Memory / SD karatra. 'Access Nolavina ny' na tsy azo vakina, haino aman-jery karatra fahadisoana, orinasa fametrahana ny fitaovana tsy misy nomaniny ho solon'izay etc.
Haingana sy mora Retrieve Very rehetra Files
Mandrosoa ny tahirin-kevitra ary fidio rindrambaiko fanarenana ny karazana rakitra tianao indray.
Notarafina ny Device / Computer: Mifidiana ny lalana / toerana izay misy ny angon-drakitra occured fahaverezana, ka Click "Manaraka" hanohy.
Mifidy Recovery: Preview, sitrana sy Save Files.
Ny tahirin-kevitra tsara indrindra fanarenana rindrankajy @affordable vidiny ... sitrana 70 GB angon-drakitra tao anatin'ny 3 hrs ... thanx zarao ho Wondershare Data Recovery 4.8.3!
ny Arun Bhave, Nashik, India
Nanampy ahy indray fanamarihana tena zava-dehibe ary ny amin'ny fitsarana maimaim-poana! Niezaka in tahaka izany anie toerana ary izany dia nanampy ahy fotsiny soo be! Misaotra anao!
Ity rindrambaiko Afaka indray ny angona avy ny Android Phone fa ATT fivarotana tsy afaka !! Ny tahirin-kevitra efa nohariny kapila corupt sy rindrambaiko io namonjy ny andro 3000+ an'ireo Zafikeliko sary!
nataon'i Michael Potter
Ny tsara indrindra sy ny Complete Recovery Software for Computer & Storage fitaovana
Ahoana no sitrana voafafa Files avy any Recycle Bin
Fomba roa sitrana PowerPoint Files Mora
Ahoana no sitrana Data avy Sata Hard Drive
Ahoana no sitrana Very Data avy NTFS Hard Drive
Ahoana no sitrana Data avy WD Hard kapila
Ahoana no sitrana voafafa mailaka
Ahoana no sitrana voafafa Files avy amin'ny USB Drive
• Azoko sitrana voafafa antontan-taratasy ela lasa izay?
Eny, afaka indray ny angona voafafa na inona na inona vanim-potoana ny fotoana, raha mbola tany am-boalohany very tahirin-kevitra dia tsy overwritten ny tahirin-kevitra vaovao.
• Inona no azoko maimaim-poana ny fitsarana an'i Wondershare Data Recovery?
Ny fitsarana dia manana dika ny lafiny rehetra amin'ny Full Version, fa ny tontalin'ny haben'ny ny antontan-taratasy dia Tsikirity recoverable amin'ny 300MB (Windows Version). Tsy misy fetrany ny Full Version.
Afaka mivoaka miaraka amin'ny fitsarana dika amin'ny fipihana eo "Free Fitsarana".
Tsy marina izany fetra eo amin'ny Full Version. Rehefa mividy sy misoratra anarana ny rindrambaiko, dia hamaha izany ny Full Version, izay tsy misy voafetra.
Ve ianao datarecovery.wondershare.com avy mitsidika ivelan'ny Etazonia?
Tsidiho ny toerana isam-paritra ho an'ny manan-danja kokoa Pricing, fisondrotana sy ny zava-mitranga.
Switch To: Sinoa Anglisy
Copyright © Wondershare. Zo rehetra voatokana.